Kitaabka lagu xadgudbay yaa ka masuul ah
Kitaabka lagu xadgudbay yaa ka masuul ah?
Scw: waxaan salaamayaa umadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, waxaan hoog iyo halaag u rajaynayaa ciidamada gumaysiga madow ee itoobiya ee dalkeena ku soo galay xadgudubka , welina dulmiga ku haya iyo dilka iyo bar kicinta umadda soomaaliyeed .
Waxaase wax laga naxo ah waxa ay hadda bilaabeen oo ah inay masaajidadii oo ah guryaha ilaahay ay ku saxaroodeen kitaabkii ama masxafkii kariimka ahaana ay u isticmaalaan waraaqo ahaan.
Laba nin oo walaalo ah ayaa beri is waraystay markaasaa mid kii kale weydiiyey war hooyo ka waran , markaasuu yiri maxaad hooyo ku ogeyd markaasuu ugu jawaabay indho la,aan markaasaa kii kale yiri waxay hadda ku darsatay dad cunimo.
Hadda itoobiyaanku waxay dadkii ay dilaayeen iyo dhibkii ayshacabka ku hayeen ku darsadeen in ay kitaabkii alle heerkaas gaarsiiyaan.
Hadaba ilaahay amxaar u qaban maayo denbigaas waayo xabshi waa gaal oo naar waa la gelin gaalnimaduuna ku mutaystay, laakiin kuwa amxaarka dalka keenay , kuwa sababay amaan darada , kuwa dilka iyo dowlad la,aanta , iyo qof kasta oo masuul ka ah in xaalada soomaaliya ay heerkaas gaarto ayaa masuuliyadaas wax ku leh.
Waxaan filayaa inaan denbigaas loo qaban karin qof keli ah ama koox ama beel balse arintani waa arrin uu masuul ka yahay qof kasta oo soomaali ah oo ka aamusan inuu wax ka yiraahdo ama wax ka qabto dhibka soomaaliya.
Muqdisho: Askarta Itoobiyaanka oo Kutubta Quraanka Iskaga Tiray Saxarada, Masaajiddana ku dhex saxarooday
Nabadda iyo amaanka iyo cadaalad daradii dalkeena oo luntay 17 sano ayaa keentay in dadkeenii heerkaas gaaro ilaa masaajidkii lagu saxarooday kitaabkiina laga dhigtay waraaqaha godka loo isticmaalo. in kastoo aan anigu sheekadana ka akhriyey bogga internetka ee www.somalitalk.com ayna ka soo xigteen nin soomaaliyeed oo oday ah, waxaan hubaa in hadiiba aad la yaabtaan oo ay idiinla muuqato inaynan dhicin ay tahay mid beriba dhici doonta.
Ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadaayaa war soomaaliyeey alle ha loo noqdo , qabiilka iyo foolxumadiisana ha laga haro, dalka iyo dadkana ha loo naxariisto, sharafta iyo karaamaduna waxaa soo celin kara oo keli ah midnimo , walaalnimo iyo inaga oo is jeclaana kana harna sheekada beenta ah ee ninba nin ku mushquulay, iyo kala qaybsanaanta .
Umadda soomaaliyeed waa inay ogaadaan in meel kasta oo ay kala joogaan ay walaalo yihiin si kasta oo siyaasadda la isugu khilaafona aan walaaltinimadii dhamaan aanna la raacin mowjadaha siyaasadda.
Waa in la ogaado in koonfurta iyo woqooyiga dadka joogaa ay yihiin dad walaalo ah marka laga soo tago herdanka siyaasadda , waa in la ogaado in puntland iyo somaliland aanay isku haysan dad shacab ah , ayna dadka dega dhulkaas iyo kuwa koonfurtuba ay yihiin kuwo walaalo ah, xidid ah is dhalay ayna wadaagaan wax kasta oo dad wadaago.
Walalayaal ha laga soo noqdo wadadan qaldan ee lagu tegey oo ha loo soo noqdo in la noqdo ummad islaam ah oo alle ku walaaloobay ilaahayna uu allohooda yahay oo ay caabudaan.
Waana in laga wada damqado kitaabka kariimka ah iyo sida xun ee loola dhaqmay, ciidamada amxaaraduna waxaa joogitaankooda soo yarayn kara nabad aan dhexdeena ka dhalino.